13 MEY 2017 : Hankalaza ny fahenin-taona ny Free FM | NewsMada
Anisan’ireo hanafana ny lanonana ny tarika Rossy.
Hanamarika ny faha-6 taona nijoroany ny onjampeo Free Fm, 104.2, ny sabotsy izao. Hetsika ara-javakanto etsy amin’ny Kianja Kanto Mahamasina no hankalazana manetriketrika ny tsingerintaona…
Vanim-potoana miavaka! 13 mey 2011-13 mey 2017. Feno enin-taona amin’ny sabotsy izao ny onjampeo Free Fm, 104.2. Hetsika ara-javakanto hafanain’ny mpanakanto manana ny lazany eto Madagasikara no hanamarihana ny fankalazana. Etsy amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina no hanatanterahina amin’ny fomba manetriketrika ity faha-6 taon’ny Free Fm ity, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Hanafana ny fotoana ny tarika Rossy, Dah’Mama, Princio, Raboussa, Sheylah, Ramora Favori, G’as.ta. Mpanakanto samy manana ny lazany sy ny ngadona voiziny no hitondra ny kantony mandritra io fotoana io. Marihina etoana, fa tsy misy vidim-pidirana ity hetsika ara-javakanto hankalazana ny faha-6 taona ny onjampeo Free FM ity. Ialana ny mety ho fifanosehana eo am-pidirana, misy ny tapakila maimaimpona, raisina mialoha aty amin’ny foiben’ny Radio Free Fm, rihana faharoa ety amin’ny Villa Pradon Antanimena.
Mivoy hatrany ny fahafahana
Tsy mivaona amin’ny fotokevitra nijoroany ny Free Fm, ny fivoizana hatrany fahafahana, izay mbola saro-toerana eto amin’ny tany sy ny firenena. Manaporofo izany ny famakafakana sy ny fandraisana anjaran’ny mpihaino, amin’ny alalan’ny “Anao ny fitenenana”. Fampisehoana mivantana ny vahoaka ny olana sy ny vahaolana, na ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy…hoenti-mampandroso ny firenena iaraha-manana. Ho an’ny Free Fm manokana, tsy mihemotra amin’ny fampijoroana ny fahafahana ary tsy mataho-maso mena amin’ireo vato manoa riana sy volo manoa randrana.
Tsy mitsaha-mivelatra rahateo, ny onjampeo, satria teraka tao anatin’izay ny gazety Free News, nanatevin-daharana ny tolona. Raha ny vinavina, tsy hianona fotsiny amin’ny onjampeo sy ny gazety ny mpitantana, izay mieritreritra ny hiterahan’ny fahitalavitra Free Tv. Tsy vitsy ireo olom-pirenena no efa mangataka ny hisian’izany fahitalavitra izany. Mijoro ary mitozo hatramin’ny farany amin’ny fametrahana ny “fahafahana” sy fanehoan-kevitra amam-pahalalahana ny Vondrona Free, anatin’ny fotokevitra ijoroan’ny fahamarinana, eto amin’ny tany sy ny firenena.